satyakura | Just another WordPress.com weblog
कविता भर्सेस ब्राह्मणवाद
शनिवार, साउन २८, २०७४
‘लोकतन्त्रको अमानवीय संकटका बेला
बचाउन सक्छु म
यही एक मात्र विचारले
लेख्छु म कविता
अन्यथा यो यति दुस्साध्य र कष्टप्रद छ
कि कुनै पनि व्यक्ति
एक्लै, शान्तिपूर्वक ।
-धूमिल (भारतीय कवि)
सेलिब्रिटीजस्तै सर्वत्र चिनिनु, वाहवाही कमाउनु छ भने कविता उपयुक्त माध्यम होइन । त्यसका लागि खेलाडी, स्टेज तताउने पप गायक, सुपरस्टार, हास्य कलाकार वा पोर्नस्टार हुनु बेस कुरा हो । त्यसैले कविता वा साहित्यका पाठक, श्रोताको संख्या व्यापक हुँदैन । त्यसले तपाईंलाई राजेश हमाल, मनीषा कोइराला, इन्दिरा जोशीलाई जस्तो स्टार बनाउँदैन । अखबारका नियमित स्तम्भकारलाई जति पनि चिनाउँदैन ।
तर, कविताले तपाईंभित्रको असहमत पात्रलाई वाणी दिन्छ र वामपन्थलाई प्राण दिएर बचाइराख्छ । त्यसले नै ठूलाठूला परिवर्तनका लागि विचार निर्माण गर्छ । विचार निर्माणको स्रोतकेन्द्र धेरै फराकिलो नभए पनि त्यसको दीर्घकालीन र परोक्ष प्रभाव व्यापक हुन्छ । मिडिया कभरेज, विज्ञापनबाजी, बिक्रीको कृत्रिम आँकडा र प्रकाशन गृहहरूको प्राथमिकता देख्दा उपन्यास नेपाली साहित्यको मूलधार हो कि भन्ने भान पर्न सक्छ । यथार्थ जे भए पनि उपन्यासको हाट-बजार लामो समय गुलजार रहन मुस्किल छ । कविता मानव समाजको आदिम युगदेखिकै सिर्जनाको मूलधार हो । बजार, प्रकाशक र अखबारलाई उति रुचिकर नलागे पनि सिर्जनाको यस धारलाई छेक्न असम्भव छ ।
नेपाली साहित्यमा आज अनेक समूह छन् । त्यही समूहभित्र पनि अनेक गुट छन् । ती समूह र गुटमा नरहेका वा तिनले नरुचाएका लेखक जति राम्रो लेखे पनि उपेक्षित हुन्छन् । गुटमा छिर्नेहरू नै सदैव चर्चामा रहन्छन् र तिनैले अवसर पाइरहेका हुन्छन् । (यो त्यस्तै कुरा हो जस्तो कि आजका उत्पात पढैया भनिएका व्यक्तिले शिवकुमार राईको ‘डाक बंगला’, केशवराज पिँडालीको ‘एकादेशकी महारानी’, डीपी अधिकारीको ‘धर्ती अझै बोल्दैछ’जस्ता गहिरो अन्तर्दृष्टियुक्त उपन्यासको नामै सुनेका छैनन् । ‘शिरीषको फूल’ भनेर मरिहत्ते गर्नेहरूले पारिजातकै अर्को बेजोड उपन्यास ‘पर्खालभित्र, पर्खालबाहिर’ पढेका छैनन् । चर्चा र हल्लाको बजारमा राम्रा कृतिहरू अक्सर यसरी ओझेल पर्छन् । तर, युगान्तकारी त तिनै कृति ठहर्छन् !)
चर्चा यस्तो कारखाना हो जसले अरू धेरै चर्चालाई जन्माउँछ । तर, चर्चा नामको अनर्गल हल्ला हटाइदिने हो भने कतिपय चर्चितका कवितामा कविता पूरै गयल भेटिन सक्छ । अर्कातिर, हल्ला र चर्चाको बजारमा, मिडियामा बारम्बार नाम नआउँदैमा कवि सकियो भन्ने पनि हुँदैन ।
गोपालप्रसाद रिमाल किन अविस्मरणीय छन् भने उनले कवितामा चेतनाको मुहान खोले । भूपि किन प्रिय छन् भने उनले नेपाली समाजको चरित्रमाथि मार्मिक भाषामा युगीन व्यंग्य गरे । वासु शशीले ‘देश अर्थात् देश खोइ’, वैरागी काइँलाले ‘मातेको मान्छेको भाषण..’, विमल निभाले ‘हत्यातन्त्र’, ‘इच्छा’, श्यामलले ‘छाला’, ‘लुतो’, गोविन्द वर्तमानले ‘अस्तित्वसोच’, आहूतिले ‘गहुँगोरो अफ्रिका’, पूर्णवरामले ‘गोविन्दले ठीक भन्यो’, कृष्णभूषण बलले ‘काठमाडौँ एक्लैले काठमाडौँ बोक्न सक्दैन’, विक्रम सुब्बाले सगरमाथा ‘नांगै देखिन्छ’, श्रवण मुकारुङले ‘अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस’जस्ता उच्च राजनीतिक कविता लेखेकाले ती स्मरणीय छन् । ‘साला पहाड मे क्या है’, ‘गाउँको पाठशाला’, ‘जर्सापको कुकुर’, ‘बतास’जस्ता थोरै कविता लेखेर पनि मीनबहादुर विष्टलाई प्रेमपूर्वक स्मरण गरिन्छ । ‘के तपाईं मलाई चिन्नुहुन्छ महाशय’जस्ता कविता लेखेर हरि अधिकारी अनि जीवन र जगत्का अनेक विडम्बनालाई कवितामा तिख्खर वाणी दिएर शैलेन्द्र साकार स्मरणीय छन् । तर, गुट वा समूहले चर्चित बनाएका कैयन् यस्ता लेखक, कवि छन् जसका एउटै रचना सम्झनलायक हुँदैनन् ।
चर्चाले लेखकको कृतितर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछ । पाठकलाई झकझकाउँछ । त्यतिका भरमा लेखक दीर्घजीवी र उत्कृष्टचाहिँ हुँदैन । विचार र कलाचेतनाको गहिराइमा पुग्न सक्ने लेखक नै सदैव स्मरणीय हुन्छ ।
अनर्गल हल्ला र गुटवाजीबाट बिलकुल भिन्न दुनियाँमा रहेर समकालीन विडम्बनामाथि उच्च स्तरको राजनीतिक व्यंग्य गर्नसक्ने बेजोडा कवि हुन्- सुरेश किरण । उनको एउटा कविताको शीर्षक छ, ‘घण्टाघर मसँग समय सोधिरहेछ ।’ यो शीर्षकले मात्र पनि कति ठूलो कविता बोकेको छ ! पहिचान मुद्दाका सर्वाधिक अनिन्द्य कविता लेख्ने कवि हुन्- भूपाल राई । सरिता तिवारीले ‘हे देवी’ कवितामा कुनै युगमा शक्तिस्वरूपा नारी सामन्ती युगमा दासी हुँदै आधुनिक भोगवादी युगमा कसरी भोग र शृंगारको साधनमा परिणत भई भन्ने इतिहासको सटिक लेखा तिख्खर भाषामा उतारेकी छन् । उनले नारीको त्यस अवस्थाप्रति तीव्र विद्रोह प्रकट गरेकी छन् ।
सरस्वती प्रतीक्षाले ‘तथागत, मलाई उत्खनन गर’मा बुद्ध र सुजाता सम्बन्धको प्रचलित कथाकै विनिर्माण गरेर नारीको प्रेम र उत्कण्ठाको तीक्ष्ण अभिव्यक्ति दिएकी छन् । यी कविता सरिता र सरस्वतीलाई बचाइराख्ने कविता हुन् । विनोदविक्रम केसीको ‘भूमण्डलीकरण’, लक्ष्मी मालीको ‘आमा तिम्रो नाम के हो ? ‘, निभा शाहको ‘दैया’, केशव सिलवालको ‘चिबे चरा’, संगीत श्रोताको ‘खुट्टा’ तिनलाई सम्झाइराख्ने कविता हुन् । विप्लव ढकाल, मनु मन्जिल, भूपिन, सीमा आभास, उपेन्द्र सुब्बा, हेम प्रभास, हेमन यात्री रुचाइएका कवि हुन् ।
युमा, स्वप्निल स्मृति, मि श्र वैजयन्ती, राजा पुनियानी, मनोज बोगटी, राजन मुकारुङ, प्रकाश थाम्सुहाङ, सुन्दर कुरूप, मुनाराज शेर्मा, सुवास खनाल, चन्द्रवीर तुम्बापो, विश्व सिग्देल, हरिशरण परियार, केवल विनाबी, सुदीप पाख्रिन, मुक्तान थेवा, शकुन्तला जोशी, प्रकाश गुरागाईं, राजु स्याङ्तान, हरिशरण परियार, हरिहर तिमल्सिना, नवीनप्रकाश श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ, रामगोपाल आशुतोष, ज्वालामुखीजस्ता वैचारिक कविको बेग्लै छाप छ । भीष्म उप्रेती, प्रकाश सायमी, रमेश क्षितिज, ज्योति जंगल, टंक उप्रेती, अमोघ काफ्ले, सुमन पोखरेल, निमेष निखिल, दीपक सापकोटा, शान्ति प्रियवन्दना, मुकुन्द पोखरेल, नरेन्द्रकुमार नगरकोटी, विजय सापकोटा, चन्द्र गुरुङ, हरिश अधिकारीहरू ऊर्जासहित लेखिरहेका छन् । कन्फर्मिस्ट कविहरू मणि लोहनी, आरएम डंगोल, विमला तुम्खेवा, बाबु त्रिपाठी, प्रोल्लास सिन्धुलीय, नवराज लम्साल, ठाकुर बेलवासे एवम् भर्खर लेख्न थालेका देवकी अभिलाषी, सुनीता खनाल, अमृता स्मृति अन्य चर्चित केही नाम हुन् ।
साहित्य महोत्सव र ब्राह्मणवाद
कविताको मर्यादा र चर्चाबाट अब साहित्यिक क्षेत्रमा अभ्यास भइरहेको ब्राह्मणवादतिर एक दृष्टि लगाऊँ । विगत केही वर्षदेखि हल्लाको बजारमा कला, साहित्य महोत्सवहरूको भाउ बेसाहा चर्कै छ । यीप्रति लेखक र पाठकको आकर्षण किन छ भने तिनमा पर्याप्त मिडिया कभरेज, एकाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको सहभागिता, केही डिस्कोर्स र धेरै रामरमिता हुन्छन् । अत: यिनमा सहभागी अधिकांश लेखक आयोजकप्रति नतमस्तक भएर फर्केका भेटिन्छन् ।
यही प्रकृतिका नभए पनि हरेक वर्ष दसैंपछि भक्तपुरमा साहित्य त: मुज्या, विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन हुँदै आएको छ । मूलत: नेपालभाषाको कार्यक्रम हुनाले यी कार्यक्रमका मिडिया कभरेज लगभग शून्य हुन्छ । जब कि त: मुज्याले नेपालभाषाका अतिरिक्त नेपाली र अन्य सीमान्तकृत भाषाका साहित्यलाई पनि ठाउँ दिँदै आएको छ । अनि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन साहित्यका अतिरिक्त स्वास्थ्य, राजनीति, कानुन, भाषा, विकास, भूगोल आदिका जानकारलाई पनि प्रस्तुत गर्छ ।
यता, राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा प्रचारित साहित्य महोत्सवहरूमा भने सहभागी ९० प्रतिशतभन्दा बढी लेखक सुरुदेखि अहिलेसम्म उही देखिन्छन् । कार्यक्रम सञ्चालक उही । प्यानलिस्ट उही । बहसको विषय पनि उही र उस्तै । वक्ताले भन्ने कुरा पनि उही । त्यहाँ लेखनमा भन्दा बढी लेखकमा ‘सेक्स अपिल’ खोजिन्छ । शक्तिशाली महिला लेखकले भन्दा बढी ग्लेमरस मोडल र हिरोइनले ठाउँ पाउँछन् ।
नेपाल संविधानत: धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र हो । भौगोलिक रूपमा सानै भए पनि यहाँ विविध संस्कृति, भाषा, चालचलन, रहनसहन भएका समुदाय छन् । यी सबैको समग्र स्वरूप नेपाल हो । नेपाली भन्नाले खस नेपाली भाषामात्र नभई सबै भाषाको समग्र रूप हो । हो, खस नेपाली माध्यम भाषा भएकाले अधिकांश कार्यक्रम यसमै हुनु स्वाभाविक हो । माध्यम भाषा भएका नाताले अन्य भाषाका साहित्य, संस्कृति र गतिविधिको पनि सही सूचना दिनु यसको दायित्व हो ।
देशकै ‘बिकाउ लेखक’ सहभागी हुने यी महोत्सवहरूको स्वरूप भने अझै एकजातीय, एक संस्कृतियुक्त र एकभाषिक र ब्राह्मणवादकै सिकार भएझैं लाग्छन् । त्यहाँ खस परम्पराकै नेवार कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई त समेटिन्छ तर नेपालभाषा कविताको समृद्ध परम्पराबारे कुनै सेसन हुँदैनन् । न त नेवार समाजको संघर्ष र सांस्कृतिक लेखन गर्ने कुनै लेखक वा कवि समेटिन्छन् । त्यहाँ सीके लाललाई राजनीतिक बहसमा त समेटिन्छ तर मैथिली, भोजपुरी, अवधि साहित्यबारे कुनै बहस हुँदैनन् । न त्यहाँ थारू भाषा, साहित्यबारे कुनै बहस हुन्छन् । आहुतिबाहेक कुनै दलितको नामसमेत त्यहाँ उच्चारित हुँदैन । उनी पनि नहुँदा हुन् त दलित सौन्दर्यशास्त्रबारे कुनै छलफल हुँदैनथ्यो । थर्काउन र स्वर ठूलो गर्न नसकेका भए आजका राई, लिम्बू कविले पनि ढिम्किन पाउँदैनथे ।
खगेन्द्र संग्रौला र सुरेश किरण वा राजेन्द्र महर्जनले खस नेपालीमा लेख्नु एकै कुरा होइन । नयनराज पाण्डे र रोशन शेरचन, कृष्णराज सर्वहारी, नवीन विभाष, टीकाराम उदासी वा उदय जीएमले त्यही भाषामा लेख्नु पनि उही कुरा होइन । कृष्ण धरावासी र स्नेह सायमीले उही भाषामा लेख्नु पनि एकै कुरा होइन । देख्दा सामान्य लागे पनि देवकोटा र भूपि शेरचन अनि धच गोतामे र सरुभक्त ( श्रेष्ठ) ले उही भाषामा लेख्नु पनि एकै कुरा होइन । खस आर्य समुदायमा खस नेपाली भाषा रगतमै घोलिएर आएको हुन्छ ।
जब कि विमातृ भाषी नेपाली लेखकले खस नेपालीमा लेख्ने एउटा सिंगो संस्कृति, भाषा र सभ्यता नाघेर आउनुपर्ने हुन्छ । जनजातीय भाषामा खस आर्यले लेख्नुपरे तिनको हालत पनि यही हुन्छ । तैपनि विमातृ भाषीले पनि खस नेपाली भाषीकै प्रतिस्पर्धामा लेख्नु सामान्य कुरा होइन । तर, यहाँ त हामीमध्ये धेरैलाई अछूतजस्तै र यस भाषामा तिम्रो कुनै अधिकार छैन भनेजस्तो व्यवहार गरिन्छ । सायद यही प्रवृत्तिको जबाफ दिन भदौ अन्तिम साता राजधानीमा नेपालभाषा साहित्य नख: (उत्सव) हुँदैछ ।
पहिचान र नश्लवाद
अपने हि तो है जो दिल पे वार करते है फराज
बरना गैरौं को क्या खबर कि दिल कि जगह कौन सी है
ब्राह्मणवाद जातिवादकै अर्को नाम हो । महाभारतमा द्रोणाचार्यले ‘क्षत्रीय राजकुमारलाई मात्र धनुर्विद्या सिकाउँछु, शूद्रलाई होइन’ भनेर निषाध कुलका एकलव्यलाई अस्वीकार गर्नु, द्रौपदीले सूतपुत्रलाई पति मान्दिनँ भनेर मत्स्यवेद प्रतिस्पर्धाबाट कर्णलाई बहिष्कार गर्नु, अर्जुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षत्रीय राजकुलकै हुनुपर्छ भनेर कृपाचार्य र कुरुराज्यका भारदारले कर्णलाई अस्वीकार गर्नु नश्लवाद थियो ।
यता, पहिचानको मुद्दा भने ठ्याक्कै नश्लवादको प्रतिरोधमा आएको हो । अहिले चलिरहेको सत्ता खस नेपाली भाषा, हिन्दु धर्म, पहाडी राष्ट्रवादको वर्चश्व भएको ब्राह्मणवादी सत्ता हो । पहिचानको मुद्दाले त्यसलाई खारेज गरेर सबै जाति, भाषा, सांस्कृतिक निजता, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान राजनीतिक अधिकार र मान्यता देऊ भनेको हो । खासमा यो जातीय कुरै होइन, बरु एकजातीय वर्चश्वविरुद्ध सहअस्तित्वको माग हो ।
यता, केही राई, लिम्बू कविहरू पहिचानको मुद्दालाई आन्दोलनमय बनाउन महत्र्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । तिनकै कारण कतिपय नयाँ कविका लागि पहिचानमाथि कविता लेख्नु फेसनजस्तै भएको छ । नश्लीय चेतको आवाज उठाए पनि, शब्द जे प्रयोग गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा तिनले खोजेको एकजातीय वर्चश्वको अन्त्य नै हो । तर, कति अर्थमा तिनले नेपाली कविता र साहित्यको इतिहास विनिर्माण गरे पनि तिनले अपनाएको रणनीति आफैंमा ब्राह्मणवादी छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
पहिचानका मुद्दामा सबैभन्दा गम्भीर र शक्तिशाली कविता लेखिरहेका भूपाल राईसमेत तिनको सूचीमा नपरेको देखिन्छ । कवितामा अत्यन्त शक्तिशाली उपस्थिति जनाएका र पहिचानका मुद्दा उठाइरहेका नेपालभाषाका कवि त तिनको सूचीमा पर्ने कुरै भएन । तर, एकसरो परीक्षण पनि नभएका कविलाई ‘शक्तिशाली कवि’को सूचीमा राखेर तिनले उपद्रै गरेका छन् ।
नेपालभाषाका कविहरूले पहिचानको मुद्दा उठाएको त धेरैअघिदेखि हो । जुन समुदायका कविहरूले आफ्नो भाषामा कविता लेखेबापत जेलनेल भोग्नु परेको थियो, त्यही समुदायका शक्तिशाली कविहरूलाई कतै नदेख्नु अमेरिका नदेखेको मान्छेले संसारमा अमेरिका भन्ने देशै छैन भनेजस्तो हो ।
नेपाल प्रजा परिषद्ले गरेको राणाविरोधी आन्दोलनका क्रममा कतिलाई जन्मकैद, कतिलाई फाँसी र कतिलाई देश निकाला गरियो । नेवार समुदायका केही व्यक्ति भने विशुद्ध भाषासेवाका कारण पक्राउ परेका थिए । नेपालभाषामा कवितासंग्रह निकालेको निहुँमा चित्तधर हृदयलाई ६ वर्ष कैद र नेपालभाषामै ‘वर्षा’ शीर्षक आपत्तिजनक कविता लेखेको भन्दै सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई १२ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो । फत्तेबहादुर सिंहले त आफूले मात्र लेखेको नभई सबैको कविता जम्मा गरेर नेपालभाषामा कविता संकलन निकालेकाले जन्मकैद र सर्वस्वहरणको सजाय सुनाइयो ।
पूर्ण वैद्य, सुन्दर मधिकर्मी, बुद्ध सायमी, श्यामसुन्दर सय्जु, योगेन्द्र प्रधान, बुद्ध सायमी, आनन्द जोशी, केशवमान शाक्य, प्रतिसरा सायमी, सुदन खुस:, नर्मदेश्वर प्रधान हुँदै सुरेश किरण, नवीन चित्रकार, श्रीराम श्रेष्ठ, शाक्य सुरेन, सुधीर ख्वबी, रजनी मिला, पुष्प मुनंकर्मी, सौरभ शाक्य, बद्री वेदना आदि थुप्रै व्यक्ति नेपालभाषामा महत्र्वपूर्ण कविता लेखिरहेका छन् । तिनका कविता नेपाली भाषाका कवितालाई नै चुनौती हो । (मैथिली, भोजपुरी र अन्य भाषामा पनि थुप्रै होलान् । त्यसको सूचना नभएकोमा ती समुदायका कविहरूसँग म विनम्रतापूर्वक माफी चाहन्छु ।)
एक समय थियो होला जहाँ जनजाति समुदायका लेखकलाई लेखकै मानिन्नथ्यो । किनभने लेखपढ तिनको पुख्र्यौली पेसा थिएन । त्यो आफैंमा जातिवादी दृष्टिकोण थियो । अब जनजाति कविले पनि उही मुद्दा उठाइरहेका अन्य सुमुदायका कविप्रति त्यस्तै दृष्टिकोण राख्ने हो भने कसरी जातिवादको पर्खाल भत्काउन सकिन्छ ? यसरी अन्य समुदाय र कविको अस्तित्व बहिष्कार गर्ने गुटवादको आवरणमा देखिएको यो जति ठूलो जातिवाद अरू के हुन्छ ?
जब कुनै विचारलाई आन्दोलनको रूप दिइन्छ, त्यहाँ ‘व्यक्तिवादिता’ निरर्थक हुन्छ । तर, प्रगतिशील भनिएका लेखकमा जस्तै यहाँ पनि त्यही कुरा प्रभावी छ । यस्तो हुँदा कुनै स्रष्टाले शक्तिशाली कृति लेख्दा त्यसप्रति सामूहिक स्वामित्व र गर्वबोध गर्नुभन्दा बढी त्यो मैले वा मेरो मान्छेले लेखेको हो कि होइन भन्नेले कुराले बढी महत्र्व पाउँछ ।
नश्ल चेतको अवधारणा ब्राह्मणवादको अवधारणासँगै सुरु भएको हो । ब्राह्मणवाद वर्ण व्यवस्थाबाट सुरु भयो । भारतीय समाजशास्त्री डा. विजयकुमार त्रिशरणका अनुसार वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख झन्डै पाँच हजार वर्षअघि सर्वप्रथम ऋग्वेदको पुरुषसूक्तमा भएको हो । ऋग्वेदको दसौं मण्डलको ९०औं सूक्तमा पुरुषसूक्तको वर्णन छ । त्यसको एक स्तुतिअनुसार आदिपुरुष प्रजापति ब्रह्माको उत्पत्ति सृष्टिपूर्व नै भइसकेको थियो । उनका सन्तान देवताहरूले उनलाई ‘दैविक बलि’ चढाए ।
फलस्वरूप ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, हातबाट क्षत्रीय, जाँघबाट वैश्य र खुट्टाबाट शुद्र उत्पत्ति भए । त्यसैगरी, मुखबाटै इन्द्र र अग्नि, मस्तिष्कबाट चन्द्रमा, आँखाबाट सूर्य, श्वासबाट हावा, नाभीबाट वायु अनि यही ‘दैविक बल’बाट ‘पवित्र सिद्धान्त’ उत्पत्ति भयो । पुरुषसूक्तको मन्त्र संख्या ११ र १२ मा चार वर्णको उत्पत्ति ईश्वरले नै गरेको मात्र उल्लेख छ । यसैलाई यजुर्वेद र अथर्ववेदमा पनि उल्लेख गरियो । उत्तरवैदिक हिन्दु धर्मग्रन्थहरूले वर्णलाई चार सामाजिक वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा व्याख्या गरे ।
ब्राह्मणवादप्रति असहमति राखेर विद्रोह गर्ने सम्भवत: पहिलो उल्लेख्य व्यक्ति बुद्ध थिए । उनले आफ्नो संघमा उपाली, सुनीत, स्वास्तीलगायत शूद्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर वर्ण व्यवस्थालाई धुलो चटाइदिए । त्यसकै प्रतिरक्षाका रूपमा ब्राह्मण राजा पुष्यमित्रको कालमा मनुद्वारा ईश्वी पूर्व १५० मा रचित ‘मनुस्मृति’ आयो । यसमा चार वर्णको विस्तारित व्याख्या र विशेष वर्णन गरियो । यसलाई हिन्दु समाजको दण्ड विधानका रूपमा व्याख्या गरी पहिलोपल्ट संस्थागत गर्ने काम भयो । भारतीय मानवशास्त्री चन्द्रभान प्रसादका अनुसार, यसमै पहिलोपल्ट शूद्रमाथि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक निषेधको व्यवस्था गरियो ।
अर्कातिर ब्राह्मणलाई हरेक प्रकारले विशेषाधिकार दिई सर्वोच्च पदमा स्थापित गरियो । ब्राह्मणको काम धर्मग्रन्थ पाठ गरी पुरोहित्याइँ गर्नु, क्षत्रीयको काम लडाइँ, वैश्यको काम व्यापार र शूद्रको काम यी तीन समुदायको सेवा गर्नु तोकियो । ब्राह्मण जति मुर्ख भए पनि देवता, भूदेव, क्षत्रीय जति अशक्त भए पनि लडाकु, नेवार (वैश्य) जति अल्छी भए पनि व्यापारी, किसान अनि शूद्र जति विद्वान् र योग्य भए पनि निन्दनीय हुने भयो ।
यसलाई एक कदम अघि बढेर नवौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा शंकराचार्यले हिन्दु धर्मको आधारशिला खडा गरे । उनको यो कदम त्यतिखेर ज्ञानमार्गका रूपमा प्रख्यात र व्यापक भएको बुद्ध दर्शनको प्रतिरक्षामा आएको थियो । त्यस क्रममा उनले भेटेसम्मका बौद्ध दर्शन र साहित्यलाई खरानी पारिदिए । पछि जयस्थिति मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर राणा, राजा महेन्द्रले यसलाई संस्थागत गरे । राजा ज्ञानेन्द्र हुँदै अहिलेको राप्रपा नेपालदेखि अन्धराष्ट्रवादीले यसलाई जोगाउन अनेक प्रयत्न गर्दैछन् ।
इतिहासमा ब्राह्मणवादविरुद्ध जेजति विद्रोहहरू भए, तीमध्ये धेरैजसो पछाडि आफैं ब्राह्मणवादको सिकार बन्न पुगे । वेद, ईश्वरको अस्तित्व, जातिभेद, वस्तुको अमरतामाथि बुद्धले प्रश्न उठाए । ईश्वरवादका प्रखर आलोचक तिनै बुद्धलाई पनि पण्डाहरूले ईश्वरको जामा पहिर्‍याएर धर्मको व्यापार गरे । आज संसारमा सबैभन्दा बढी बुद्धकै मूर्तिहरूको व्यापार र पूजा हुन्छ । उनकै नाममा संसारमा सबैभन्दा धेरै मन्दिर बनेका छन् । तिनै बुद्धलाई भगवान् विष्णुको नवौं अवतार भनी व्याख्या गरियो । बुद्ध दर्शनमा यसरी पुरोहितवाद छिर्‍यो ।
ब्राह्मणवादविरुद्ध भनिएको पहिचानवादी आन्दोलनलाई सेन्समा बुझिएन भने त्यसको हालत पनि बुद्ध दर्शन धर्ममा परिणत भएजस्तै हुन सक्छ । अनि, त्यहाँ पनि जातिवादकै अभ्यास हुनुपुग्छ । प्रस्ट छ, हरेक खालका जातिवादहरू ब्राह्मणवादकै स्वरूप हुन् । यसलाई मनुवाद, पुरोहितवाद, भाग्यवाद आदि जे नाम दिए पनि हुन्छ । ब्राह्मण समुदाय सबै ब्राह्मणवादी र अन्य समुदाय सबै ब्राह्मणवादविरोधी भन्ने त हुँदै होइन । वैश्य र शुद्रलाई निचा मान्ने क्षत्रीयहरू, नेवारमै च्यामे, पोडे, कसाई, गाइनेलाई अछूत व्यवहार गर्ने शाक्य, वज्राचार्य, प्रधान, श्रेष्ठ र जोशीहरू, मधेसीमै डोम, मुसहर, पासवान, वादीलाई अछूत ठान्ने झा, यादव, मि श्रहरू, दमाई, कामीलाई अछूत व्यवहार गर्ने राई, लिम्बू, मगर, गुरुङहरू अनि दलितमै अन्य दलितलाई साना जाति भनेर छुवाछूतको व्यवहार गर्ने दलितहरू सबै ब्राह्मणवादी हुन् ।
विचारका पक्षधरहरू प्रतिगामी हुन सक्दैनन् । तर, आफैंलाई मुक्त गर्न नसक्नेले समाज र देशलाई ब्राह्मणवाद, जातिवाद, भाग्यवाद र ठालुवादबाट मुक्त गर्न सक्दैन । अनि मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको बहुचर्चित व्याख्या ‘फ्याटालिज्म’ को सिकार ती आफै हुन पुग्छन् । तपाईं ब्राह्मण हुनुस् वा राई, लिम्बू, नेवार वा दलित जेसुकै हुनुस्, मनभित्र संस्कारका रूपमा बेरिएर बसेको ब्राह्मणवादलाई नमिल्काएसम्म तपाईं कसरी ब्राह्मणवादविरुद्ध लड्न सक्नुहुन्छ महोदय ?
By Avaya Shrestha
भाद्र कृष्णाष्टमी नजिकिँदै गर्दा गाउँ–सहरका कुनाकाप्चा कृष्ण भजनले गुन्जायमान हुन थालेका छन्। हिन्दी सिरियलहरू श्रीकृष्णमय भइसके। प्रेमका ईश्वर अनि संसारमा अन्याय र पाप नाश गर्न आएका विष्णुका आठौँ अवतारका रूपमा कृष्णको आराधना गरिन्छ। आफ्नो आस्थाका युगपुरुषलाई पुज्ने र ईश्वरका रूपमा सम्मान गर्ने मानिसको अधिकारलाई म सम्मान गर्छु। म आफै पनि हिन्दु संस्कृति र परिवेशमा हुर्केको हुँ। तर, म पुराण युगलाई समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्न रूचाउँछु। रजनीकान्त शास्त्रीको ‘हिन्दु धर्मका उत्थान और पतन’, देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायको ‘लोकायत’, भारतको विश्व बुक्सका आलोचनात्मक प्रकाशनहरू मेरो दृष्टिकोणका सहायक हुन्।
‘गीता’ मा कृष्णले अर्जुनलाई दिएको एउटा प्रमुख उपदेश हो, कर्म गर, फलको आश नगर। यसको अन्तर्य कर्मयोगमा छ जुन अत्यन्त महŒवपूर्ण छ। पहिरो लाग्ला वा बाँदरले नाश गर्ला भनेर किसानले बाली लगाउन छाड्दैन। एल्बम नबिक्ला भनेर संगीतकारले नयाँ मुर्च्छना रच्न छाड्दैन। पाठक कम छन् भन्दैमा कविले कविता लेख्न छाड्दैन। सयौँ प्रयोगको असफलतापछि स्टिभ जब्स हरेक कोठामा अट्ने कम्प्युटर बनाउन सफल भए। ९ सय ९९ पटकको असफलतापछि पनि थोमस एल्बा एडिसनले बिजुलीको चिम बनाइछाडे। यही हो कर्मयोग। Read the rest of this entry »
‘Don’t limit yourself to conventions’
Author of two poetry anthologies andastory collection, Avaya Shrestha is also known for the various columns he writes foranumber of dailies. In this conversation with Post’s Samikshya Bhattarai, Shrestha talks about poetry, Nepali literature and what aspiring writers need to focus on. Excerpts:
You areapoet andafiction writer too. What importance does each genre hold?
Poetry and fiction are both very important genres of literature that hold distinctive significance in literature. Compared to other genres, imagination and creativity are central in both fiction and poetry. These genres go beyond just providing accounts of an event or stating facts and truths to incorporate philosophy and interpretations.
Fiction and poetry are the soul of literature—its art. They don’t command people to thinkacertain way. These genres are compelling in nature and draw people swiftly to the message they are trying to deliver. They are better and more promising mediums to invokeasense of change in readers.
Although fiction and non-fiction have been flourishing in last few years, poetry still lags behind in comparison.
I don’t actually think that poetry lags behind fiction and non-fiction. If we look at the creative development of poetry in last few years, the field has seenarise of new, good, and enthusiastic poets who have their own unique style and good command over the language. These poets have created an ecosystem where good poetry can thrive. Yes, there is still room for growth and the new-gen poets still need to work hard to meet the standards set by legends such as Bhupi Sherchan and Gopal Prasad Rimal. But, this does not mean that the field has seen no development or that it lags behind. If you look commercially, yes, there is not much money in poetry. But, I personally think that when you judgeagenre you should not look at the money it is making, rather focus on how many hearts it stirs.
What do you think are the most important aspects of fiction and of poetry?
When it comes to literature, regardless of genre, the most important aspect is the content. I think that if the content ofastory orapoem is not enticing enough, then other factors such as language and originality will not matter at all. It is also important that the writer has enough knowledge about the message they are trying to deliver. Besides these two factors, the language should be as strong as it is comprehensible. A good idea can only be delivered through good presentation.
Asapoet who has worked for almost two decades in this field, what advice would you like to give to aspiring poets?
One of the things that I find very disappointing in new poets is their emphasis on how to write rather than what to write. The new generation of poets focus most of their energy and creativity on their style of poetry rather than the content of the poem. I think poetry will not be able to create any impact if the content is not good enough, so I would like to advise the aspiring poets to focus more on content. Also, I think after beingapoet or an author one should take risks and write about things that not many others are writing. It is important to let their thoughts run wild and not limit themselves to conventions.
What is your take on the current scenario of the readership in Nepal?
If we look in terms of number, there has been an increase in number of readers and there are more people who read Nepali literature. However,I think readers are still not aware about the difference between good literature and popular literature. Most of the readers just get their hands on popular literature due to which good books and writers have not been able to flourish.
Published: 19-07-2017 07:43
Photo by Ashok Shrestha
बुद्धका दश विपत्ति
बुद्धको नाम लिनेबित्तिकै सर्वसाधारणको मनमा शान्ति र सदाचारको सूर्य उदाउँछ । तर, उनी निरपेक्ष शान्तिका पक्षधर थिएनन् । शान्तिको मन्त्र जप्दैमा त्यो त्यसै आउने कुरा होइन । शान्ति ल्याउनु छ भने अन्याय हटाउनुु अनिवार्य छ । ‘जहाँ अन्याय छ, त्यहाँ छायाले जस्तै अशान्तिले पछ्याउँछ,’ उनी भन्थे, ‘अन्यायमा शान्तिको खोजी त्यतिकै निरर्थक छ जति निरर्थक सिउँडीको बोटमा सुन्तला फल्ने आशा गर्नु हुन्छ ।’ आज अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको तनावले विश्वशान्ति खलबलिने खतरा छ । तर, २५ सय वर्षअघि जन्मेका बुद्धको शान्ति र न्याय चेत यति उँचो थियो जसलाई एक्काइसौँ शताब्दीका ‘शान्तिवादी’ हरूले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । भारतीय विद्वान् बीआर अम्बेडकरको किताब ‘बुद्ध एन्ड हिज धम्म’ का अनुसार शाक्य र कोलिय राज्यबीच रोहिणी नदीको पानी प्रयोग गर्नेबारे झगडामा तत्कालीन राजकुमार सिद्धार्थले आफ्नै राज्यका किसानको पनि गल्ती औँल्याएका थिए । आफन्त, पराई वा राष्ट्रवादभन्दा उनका लागि मानवता, न्याय, सत्य र अहिंसा सर्वथा महत्त्वपूर्ण थिए ।
केही पनि सोच्दैन…
केही पनि बोल्दैन…
केही पनि नसोचेपछि
केही पनि नबोलेपछि
भारतीय साहित्यकार उदय प्रकाशको यो सानो कविताले जिउँदो र मरेको मानिसबीच जीवन–रेखा कोर्दछ, सोच्ने र बोल्ने मानिस मात्रै बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने बलियो र ठूलो भाव जन्माउँछ। मानिसमा सोच्ने र बोल्ने कर्म त्यतिखेर मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिखेर उसले सन्देह गर्छ, प्रश्न गर्छ अनि सन्देह र प्रश्नका साथ चिन्तन–मनन पनि गर्छ। यस्तो जीवन्त प्रक्रियाबिनाको सोचाइ र बोलाइले मानिसलाई जिलाइ राख्दैनन्।
तिम्रा सम्मानित गुरूले
मिठो भाषामा सुनाएका कथा
महान् इतिहासकारले लेखेको इतिहास
र, संसारका सर्वमान्य मूल्यहरूमाथि पनि सन्देह गर –अभय श्रेष्ठ।
सामान्यतः परिवारदेखि समाजसम्मले, स्कुलदेखि पार्टीसम्मले हामीलाई जिज्ञासु बनाउँदैनन्, बरु हाम्रा सन्देह, प्रश्न, चिन्तन–मननको संहार मात्रै गर्दछन्। तिनले हामीलाई समाज होइन, सिद्धान्त पढाउँछन्, संसार (वल्र्ड) होइन, शब्द (वर्ड) अध्ययन गर्न सिकाउँछन्। त्यसैले होला, मैले पनि नेपाली समाजभन्दा पहिले चीन र रुसको समाज पढेँ, बुद्धदेखि योगमायाभन्दा पहिले नै माक्र्सदेखि माओसम्म पढेँ, त्यो पनि कुनै सन्देह र प्रश्नबिना नै। तर माक्र्स पढ्दै जाँदा सबैभन्दा घतलाग्ने र उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने सूत्रवाक्य फेला पारेको थिएँ, ‘डाउट एभ्रिथिङ (सबै चीजमाथि सन्देह गर)!’
Floating colors on beautiful lakes
सुन्दर परियारको नयाँ थर
सुन्दर परियार नेपाल आएको १० महिना बित्यो । तर, फर्कने नाम लिइरहेको थिएन ।
अमेरिकाको इडाहो राज्यस्थित पोकाटेलोमा उसको नेपाली सामान पाइने ग्रोसरी राम्ररी चलेको थियो । श्रीमतीलाई त्यो समाल्न भ्याइनभ्याइ थियो । यता, बहिनीको बिहेको केही दिनमै ०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो । त्यसको विनाशलीला देखेर उसको मन भताभुंग भयो । भूकम्पपीडितको उद्धारमा उसले ज्यूज्यान लगाएर सघायो ।
युनिभर्सिटी अफ इडाहोको आडैमा रहेको ग्रोसरीबाट श्रीमती बारम्बार ताकेता गरिरहन्थी । उसले एक महिना, अर्को महिना गर्दागर्दै यत्रो समय बितायो । एकपल्ट त उसले श्रीमतीलाई पनि पसल बेचबिखन गरेर नेपाल फर्कन भनेको थियो । श्रीमतीले सातो लिने गरी हकारी ।
श्रीमती थिई क्षत्रानी कुलकी । बेलाबेला जातको घमण्ड उसको बोलीमा प्रदर्शन हुन्थ्यो । हिजैमात्र त्यसले स्काइपमा उसलाई बेसरी हकारेकी थिई ।
‘अँ, तिमी आउने कि नआउने भन त ?’
‘आउने नि, किन नआउनु ?’
‘अनि किन नमुन्ट्या त ?’
‘गाउँमा यहाँ बेहाल छ । मान्छेलाई बस्ने बास छैन, खानलाई गाँस छैन । यस्तो बेला हाम्ले नसघाए कसले सघाउँछ भन त ? बरु तिमी पनि केही समय यतै आऊ । दुवै जना मिलेर घरबार नभएकालाई सानोतिनो कटेरो बनाइदिउँला ।’
‘अँ..अरू केही भन्नु छ ?’
‘तिमी बाँस समाइदेऊ, म खाल्डो खनुँला । तिमी जस्तापाता समाइदेउ, म किलाकाँटा ठोकौँला । अनि लास्टाँ सँगै फर्कौँला । पसल त्यही इलामे बाहुनलाई जिम्मा लाएर आए हुन्छ । शंका गर्नु पर्दैन, त्यो मान्छे भरपर्दो छ, क्या ! बेइमानी गर्दैन ।’
‘हेर हेर, दमाई, कामीका बुद्धि घुच्चुकाँ हुन्छ भन्थे, हो रहेछ । यहाँ यत्रो बिजनेस कामदारलाई जिम्मा लाएर आऊ भन्छ । त्यहाँ तिमी नै मुन्टिराख । तिमी नै किलाकाँटा ठोकिराख । ककसलाई सघाउनुपर्ने हो, ककसका घर बनाउनुपर्ने हो, ककसलाई मासु काटेर दिनुपर्ने हो दिइराख । मलाई त्याँ आउनु छैन, बुझ्यौ ?’
‘बुझेँ । यति राम्ररी बुझाएपछि ढुंगामुडाले त बुझ्छन् । मैले किन नबुझ्नु ?’
‘तिम्रो बुद्धि त कुकुरबिरालाको जति पनि छैन, के फुर्ती गर्छौ !’
‘ल बाबा मानेँ । तर, तिमी ह्याँ आउन किन नमानेकी भन त ? दमिनी हुनुपर्ला भनेर हो ? हा…हा..हा !’
‘केको ह्या…ह्या..ह्या ! दमाईसँग पोइला गकी केटीलाई क्षत्रानी मैसाप भनेर वेलकम गर्दैनन् के रे, अनि किन आउनु ?’
‘त्यहाँ चाहिँ तिमी उपाध्याय बाउनी हुन्छ्यौ र ?’
‘साँच्चै भनेको, केही समय तिमी पनि आऊ न त !’
श्रीमती रिसाएर स्काइपमा अफलाइन भइदिई । त्यसको कर्कश स्वर उसको कानमा यसरी ठोकियो मानौँ कसैले दर्फराउँदो हातले लोप्पा खुवाएको थियो । तैपनि ऊ श्रीमतीको जिद्दी स्वभाव सम्झेर मुसुक्क हाँस्यो ।
इडाहो युनिभर्सिटी पढ्दा एउटा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा यो गोरखाली क्षत्राणीसँग उसको परिचय भएको थियो । पछि ऊ बसेकै घरको तल्लो फ्लाटमा बस्न आइपुगी । आईटी पढ्न भनेर अमेरिका छिरेकी त्यो केटी पढाइ रोकेर एउटा रेस्टुराँमा काम गरिरहेकी थिई । बिस्तारै ऊ सुन्दर परियारसँग आकर्षित भई र जातपातको फन्डा छाडेर उसैसँग बिहे गर्न तयार भई । बिहेपछि नै उसले ग्रोसरी सुरु गरेको थियो । चाँडै नै त्यसबाट राम्रो कमाइ हुन थाल्यो । त्यसलाई उसले क्षत्राणी सुन्दरीको ‘लच्छिन’ मानेको थियो ।
तर, यता नेपालमा गएको भूकम्पको विनाशलीलाले उसलाई सताउन छाडेको थिएन । उसको गाउँभरिमा १७ जना भुइँचालोले थिचिएर मरेका थिए । साराजसोको घर ढलेर सडकमा सुत्न पुगेको थियो । देशका १४ जिल्लामा त्यसले महाविपत्तिको बाढी ल्यायो । पछि वैशाख २९ सम्म त्यसले ३१ जिल्लामा आफ्नो नंग्रा फिँजायो । उद्धार गर्दागर्दै भत्केको भित्ता र दलिनले चेपिएकी एउटी वृद्धाले उसकै आँखाअगाडि प्राण छाडेकी थिई । पारि ज्यापु बस्तीमा खेतबाट आलु खनेर घर पु¥याउन गएका एकै परिवारका आठ जनाको चोला उठेको थियो । यस्तै बेला फोनबाट बहिनीले सोधेकी थिई, ‘दाइ, हाम्रो त घर भत्कियो । तर, कसैलाई केही भएन । त्यहाँ सबैलाई ठीक छ ?’ किलकिले थिचिएझैँ उसकोे वक बन्द भएको थियो । उसको आफ्नै घर पनि भत्केको थियो । उसलाई आँखा थामिनसक्नु भयो । जिन्दगीमा पहिलोपल्ट ऊ गाउँलेको मृत्युमा आफन्तकै मृत्युमा झैँ रन्थनिएको थियो ।
गाउँ छाडेर राहत सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको टोली लिएर ऊ सिन्धुपाल्चोक र दोलखा पुग्यो । घाइतेको घाउमा आफैँले मलम लगायो । राहत सामग्री अपर्याप्त भएपछि त्यो मात्र सब कुरा होइन भन्ने महसुस गरेर आफैँ भत्केका घरहरू पन्छाउन जुट्यो । गाउँ फर्केपछि देख्यो, राहत वितरणमा राजनीतिक दलहरूले धेरैलाई अन्याय गरेका थिए । जोजो अन्यायमा परेका थिए, तिनलाई आफ्नै खर्चमा जस्ताको टहरा बनाइदिन उसले कम्मर कस्यो । पैसा नपुग्नासाथ ऊ श्रीमतीलाई गुहाथ्र्यो । पहिला श्रीमतीले पनि नाइनास्ती गरिन । पछि हकार्न थाली । तैपनि उसले आफ्नै खर्चमा र एकल पहलमा गाउँका विपन्न ४० परिवारलाई टहरा बनाइदियो । अन्न पुरिएर खान नपाएकालाई चामल र नुनतेल किनिदियो ।
उसको यस्तो उदारता देखेर विभिन्न संघसंस्था ऊसँग हातेमालो गर्न आइपुगे । भत्केका सार्वजनिक विद्यालय बनाउनदेखि गरिब विद्यार्थीको छात्रवृत्ति बेहोर्नसमेत तिनले उसको अभियानमा सघाए । अमेरिका बस्ने साथीहरूले पनि पैसा पठाउन थाले । ती सबैको एकएक हिसाब राखेर उसले काम ग¥यो ।
पहिले राम्रो पढाइ भए पनि दमाई भएकाले सधैँ हेला, उपेक्षा र तिरस्कार भोगिरहेको सुन्दर अमेरिका जाने भएपछि चर्चाको पात्र बनेको थियो । भूकम्पपीडितको उद्धारमा समर्पित भएपछि अहिले गाउँभरिको हिरो भयो ।
कथा यतिकैमा टुंगिएको भए त गजब हुन्थ्यो । तर, उसको जीवनमा एउटा दुर्घटना आउन बाँकी नै थियो । त्यसको अनुमान कसैले गर्न सकेको थिएन । हुँदो हो त यस्तो दुर्घटना कदापि हुने थिएन । गाविसले अभिनन्दन कार्यक्रम नराखेको भए यस्तो हुने थिएन । अभिनन्दन गरे पनि बेलुकीको पार्टीमा ऊ संलग्न नभएको भए यस्तो हुने थिएन । पार्टीमा संलग्न भए पनि अन्य दमाई, कामीले झैँ चुपचाप सहिदिएको भए सायद यस्तो हुन्थेन ।
सुन्दर परियार अमेरिका फर्कने दिन नजिकियो । गाउँका विभिन्न क्लबले उसलाई अभिनन्दन गरे । आनाकानी गर्दागर्दै उसको जस्ताको टहरामा अनिनन्दनपत्र राख्न ठाउँ नपुग्लाजस्तो भयो । पछि गाविसले समेत गाउँबाट राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान गर्ने अन्य व्यक्तिसँगै उसको अभिनन्दन गर्ने भयो ।
अभिनन्दित हुने अन्य व्यक्ति थिए, शुभयात्रा राष्ट्रिय दैनिकका स्थानीय संवाददाता सुकमान किलम्बु, अनुष्टुप छन्दका कवि हरिओम त्रिपाठी, गुन्द्रुकको पौष्टिक महत्वमाथि पीचडी सीताराम कार्की, गाउँको पहिलो एमबीबीएस डाक्टर सोमप्रसाद नेपाल, दोहोरी गायिका तथा मोडल जुनु मगर, नाटक निर्देशक सुमेन्द्र घिमिरे, व्यापारी कमलप्रसाद सापकोटा र ब्लडप्रेसरको औषधि खाएर थान्को लागेको बुढो पत्रकार सुईबहादुर थापा ।
अभिनन्दनका दिन गाविसको आह्वानमा हरेक वडाबाट विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीसहित विशाल ¥याली निस्कियो । अभिनन्दित हुने जोजो व्यक्ति जुनजुन वडाका थिए, त्यहाँबाट बाजागाजा र नाचगानसहित तिनलाई अघि लगाइयो । सुन्दर परियारको वडाबाट त अझ विशेष प्रस्तुति थियो । उसको प्रशंसामा पुरुष र महिला समूहले दोहोरी गीतको अन्ताक्षरी नै चलाएका थिए । ज्यापु नेवारहरूले टुमटुम छ्याँ, पाकु पाकु छ्याँ गर्दै बजाएको ठुम्काको तालमा, कहिल्यै ननाच्ने पूर्वप्रधानपञ्च शुभबहादुर कार्कीसमेत फुनुक्क फुनुक्क घुम्दै, डँडालो भाँच्दै नाचेको थियो ।
सबै वडाको जुलुस गाविसको विशाल प्रांगणमा जम्मा हुँदा मञ्चबाट टाउकाहरूको विशाल सागर नै देखिन्थ्यो । वायाँबाट अलि छड्के परेर उक्लन मिल्ने मञ्चमा आसीन व्यक्तिलाई हरेक ठाउँबाट प्रस्टै देख्न सकिन्थ्यो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पनि चानचुने थिएनन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव । तोकिएको समयभन्दा एक घण्टा ढिलो गरी प्रमुख अतिथि आएपछि उद्घोषक कुमार वाग्लेले कार्यक्रम सुरु ग¥यो जो स्थानीय एफएमको लोकप्रिय आरजे थियो ।
उद्घोषकले प्रमुख अतिथिपछि अभिनन्दन गरिने व्यक्तिलाई मञ्चमा बोलायो । तर, किन हो सुन्दर परियारलाई बोलाएन । त्यसपछि जिल्ला विकास अधिकारी, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि, प्रहरी कार्यालय र वन कार्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलायो । अन्त्यमा, भूलवस छुटेकोमा माफी माग्दै उसले सुन्दर परियारलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरायो । दुई जना नवयुवतीले अतिथिहरूलाई फूलमाला लगाइदिएर स्वागत गरे । अर्का दुई जनाले ब्याच लगाइदिए । स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीले राष्ट्रिय गान, स्वागत गान र नृत्य प्रस्तुत गरे । त्यसपछि प्रमुख अतिथिले टीका, फूलमाला र सम्मानपत्र दिएर ती विशिष्ट पात्रहरूलाई अभिनन्दन गरे । अभिनन्दनका क्रममा पनि अन्तिममा राखिएपछि सुन्दर परियारलाई मनमा झस्का पस्यो । किनभने पहिला त यो अभिनन्दन कार्यक्रम उसकै लागि मात्र राख्ने कुरा भएको थियो । पछि राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिको दबाबमा अन्य व्यक्ति पनि यस सूचीमा परे ।
उद्घोषकले बेइमानी गरे पनि कार्यक्रममा सुरुका दुई वक्ताले सबैभन्दा बढी चर्चा र प्रशंसा सुन्दर परियारकै गरिदिए । त्यसपछि उद्घोषकले अर्का वक्तालाई पालो दिने क्रममा सुन्दर परियारको प्रशंसामा समुदै्र बगाइदियो । उसले सुन्दरलाई थर फेर्न पनि सुझाव दियो जस्तो कि सम्भ्रान्त हुँदै गएपछि कतिपय दलित गैरदलितको थर ग्रहण गर्छन् ।
कुरा यतिमै टुंगिएको भए केही थिएन । सुन्दर परियारलाई दशाले घेर्न बाँकी नै थियो । सारा गडबडी अभिनन्दित व्यापारी कमलप्रसाद सापकोटाले बेलुकी शुभकामना पार्टी प्यालेसमा अभिनन्दित व्यक्ति र गन्यमान्यहरूलाई दिएको ककटेल डिनर पार्टीमा भयो । रक्सीले उन्मत्त भद्रभलाद्मीले यहाँ पनि सुन्दर परियारको उधुमै प्रशंसा गरिदिए । कुमार वाग्लेले यहाँ पनि सुन्दरलाई थर फेर्न सुझाव दियो । तर, उसको तरिका निकै भद्दा थियो ।
‘यता सुन् म्याटोक्ने सुन्दरे, हामी तँलाई दमाई नै मान्दैनौँ, यति राम्रो काम गर्ने मान्छे दमाई हुनै सक्दैन’, वाग्लेले एक हातमा गिलाँस समाउँदै र अर्को हातले सुन्दरको पिठ्यु थपथपाउँदै र चोर आँखाले अरूतिर आँखा झिम्क्याउँदै भन्यो, ‘तैँले थर फेर्नै पर्छ बुझिस् ?’
स्थानीय एफएमको स्टेसन म्यानेजर रविन्द्र घिमिरेले वाग्लेलाई रोक्दै साउतीको स्वरमा भन्यो, ‘सुन्दरजी, वास्तवमै तपाईँले महान् काम गर्नुभएको छ । हुन त अब एकेडेमीकल्ली मिल्दैन, तर दिलैले भन्छु, तपाईँले थर फेर्दा राम्रो हुन्छ । जन्मले क्षत्रीय भए पनि विश्वामित्र साधनाले ब्राह्मण ऋषि भए । कुनै पनि व्यक्ति कर्मले ब्राह्मण र कर्मैले दमाई, कामी हुने कुरा हाम्रो धर्मशास्त्रैले भनेको छ । हेर्नुस्, यही गाउँका कति ब्राह्मण दिउँसै धोकेर, लाजभाड बोलेर दमाई, कामीको जुनी बिताइरहेका छन् । तिनलाई तपाईँको अगाडि कसरी ब्राह्मण भन्ने ? साँच्चै भन्छु, कर्मले तपार्इँ ब्राह्मण हुनुभयो । दमाईहरूले नेपाली थर राख्छन् । तपाईँले चाहिँ ‘नेपाल’ थर राख्दा राम्रो हुन्छ ।’
‘यो कुरा मलाई पनि उहिल्यैदेखि लागेको होे, मुख फोड्न मात्र नसकेको !’ आतिथेय सापकोटाले नरम स्वरमा भन्यो, ‘सुन्दरजीलाई परियार भनिरहनु दमाई भनेर होच्याउनुजस्तो लाग्छ । यो मलाई पनि ठीक लाग्दैन ।’
नेपाली काँग्रेस गाउँ सभापति टंकभक्त खत्रीले थप्यो, ‘हुन त यो तिम्रै इच्छामा भर पर्छ । अचेल के जाति, त्यो पहिचान सहिचानको कुरा गर्छन् तर, दमाई–कामीको भुत्रा पहिचान ! व्यावहारिक हुने हो भने तिमीले पुरानै थर झुन्ड्याइरहनु जरुरी छैन । अरू हाँडेगाँडे दमाई र सुन्दर परियारलाई एउटै ड्याङमा राख्न मिल्दैन । कहाँको हरिद्वार, कहाँको मलद्वार ! त्यसैले तिमीले थर फेर्नैपर्छ बाबु !’
‘मनासिब कुरा हो सुन्दर दाइ !’ सानै उमेरमा पण्डित्याइँ गर्न थालेको राममणि रिसालले भन्यो, ‘नत्र हामी तपाईँसँग यसरी एउटै भोजमा सँगै बसेर खाने स्थिति नै हुने थिएन ।’
‘पासा सुन्दर, कुुरा ठीकै हो,’ करातेमा ब्लाकबेल्ट प्रवेश श्रेष्ठले मीठो स्वरमा भन्यो, ‘परियार भन्नासाथ मलाई पनि कसोकसो दिगमिग लागेजस्तो हुन्छ है !’ यता, बगलमै उभिएर मिरिन्डाको चुस्की लिइरहेका प्रवेशकी श्रीमती र जुम्बा प्रशिक्षक बहिनी सुन्दर परियारलाई प्रशंसात्मक भावले हेरिरहेका थिए ।
वाग्लेले चारपाँच जनालाई तानेर एकातिर लग्यो र केर्न थाल्यो । उसको कुरा सुनेर सबै जना हाँस्न थाले । ‘जल्ले जे भने नि, कुराचाहिँ खसोखास त्यही हो, तर अचेल सार्वजनिक ठाउँमा त्यस्तो बोल्यो भने खुट्टा भाँच्छन्, के गर्नू !’ आतिथेय सापकोटाको कुरामा फेरि अर्को खेप हाँसोको लहर चल्यो ।
‘यो उहाँको व्यक्टिगट कुरा हो, यसमा कसैले डख्खल डिनु हुन्डैन’, संवाददाता शुकमान किलम्बुले वाग्लेको समूहलाई सुनाउँदै पूर्ण नेवारी लवजमा भन्यो, ‘यो कुरा एकेडेमीकल्ली पनि मिल्डैन । उहाँका छोराछोरीको हकमा भने मिल्ला । ट्याँमाठि आफू ट पहिचान पक्षढर मान्छे हेर पासा, कसैलाई ठरै फेर चाहिँ भन्न सक्डिनँ का !’
‘लौ उठ् मूला, के यो जातैपिच्छे राज्य चाहिन्छ भनेर अठ्याँ र मठ्याँ गर्ने ठुटे पत्रकारको पछि लाग्छस् !’ सुन्दरको पाखुरा तान्दै वाग्लेले भन्यो, ‘आजदेखि तँ खुइले दमाईको छाउराले पनि बाहुनको थर पाइस् । ख्याल ख्याल होइन, यो एउटा पपुलर आरजेले घाषणा गरेको कुरा हो, बुझिस् ? लौ आइज, डानस गरौँ !’
‘सुन्दर नेपाल !’
‘जिन्दावाद ! जिन्दावाद !’
‘सुन्दरे दमाई !’
सुन्दर परियारले टाउको समायो । कहिल्यै रक्सी नखाने सुन्दरले आज आतिथेयको करमा एकएक पेग वाइन र एक गिलास बियर खाएको थियो । त्यतिले उसलाई लागिसकेको थियो ।
एक्कासि उठेर ऊ बहुलाझैँ चिच्यायो । उसले टेबुलमा रहेका गिलासहरू भताभुंग पारिदियो । त्यसपछि आफैँ बसेको मेच भुइँमा बजार्न थाल्यो । भाँचिएको मेचको खुट्टा टिपेर उसले आरजे वाग्लेको नलीखुट्टामा एक दनक दियो । वाग्ले ‘मा¥यो बाबा’ भन्दै खुट्टा समाएर भुक्लुक्क ढल्यो । ढलेकै अवस्थामा त्यसको ढाडमा अर्को एक दनक दियो । दुई जना वेटर निरीहतापूर्वक हेरेको हे¥यै भए । त्यसपछि उसले जजसलाई भेट्यो, त्यत्यसलाई दनक दियो । आतिथेय व्यापारी सापकोटा, पत्रकार किलम्बु र रेस्टुराँका एकदुई कर्मचारीको समेत पिठयुँमा दनक बर्सियो । तीन जना बुढाहरू भुइँमा पछारिए । तिनीहरूको ढाडमा कुल्चेर मानिसहरू भागाभाग गर्न थाले । ती ऐया ऐया भनेर चिच्याउन थाले । दुई जना वेटर युवती थरथर काम्दै भित्तामा अडेस लागेर बसे । मञ्चमा गीत गाइरहेको टोली थुरथुर काँप्दै भ¥याङमुनि गुचमुच्च उभिए ।
मेचको खुट्टा घुमाएर भित्तामा झुन्ड्याइएको मोनालिसाको स्केच उसले झार्लामझुर्लुम पारिदियो । त्यसपछि पश्चिमतिर रहेको मञ्चमा चढ्यो । माइक फु ग¥यो । हेलो भन्यो । ‘मलाई बाहुन हुनु छैन । तपाईँहरूले सुन्नभो, मलाई बाहुन भएको नाटक गर्नु छैन । म जे छु, ठीकै छु । म सुन्दर परियार नै हुँ । दमाई भएर मैले कसैलाई हानि गरेको छैन, गर्ने पनि छैन, दमाई हुनुमा मलाई कुनै पछुतो छैन ।’ यति भन्दाभन्दै क्वाँ क्वाँ रुन थाल्यो । चार जना गार्डले उसलाई समाएर झ्याइँकुटी पार्दै तल ओराले । दौडँदै आएर दुई जना केटाले उसलाई लात र मुक्का हाने । एकैछिनमा उसको नाकमुखबाट ह्वालह्वाल्ती रगत बग्न थाल्यो । गार्डहरूले उसलाई सक्दो बचाए र बाहिर पु¥याए । एकैछिनमा प्रहरी भ्यान आइपुग्यो ।
भोलिपल्ट गाउँभरि हल्लीखल्ली भयो । कसैले सोध्नासाथ गाउँलेहरूको मुखमा जवाफ हाजिर थियो, ‘सुन्दरे दमाई बहुलायो !’
हिजोसम्म गाउँभरिको हिरो सुन्दर परियार आज एकाएक खलनायक भयो । एकपल्टलाई माफ गर्ने पक्षमा जोजो थिए, तिनले पनि बोल्ने आँट गरेनन् । सुन्दरको बाबुले गाउँलेसामु करजोरी बिन्ती गर्दा पनि केही लागेन । गाउँलेहरूको ठूलो टोली उसलाई कडा कारबाही गर्न माग राख्दै दिउँसो महानगरीय प्रहरी प्रभाग, कटुन्जेमा डेलिगेसन गए ।
आठ कविताको ब्रम्हाण्ड
समकालीन कविता राम्रा लेखिएका छन् । एउटा प्रमुख कारण हो– तीव्र प्रतिस्पर्धा र प्रकाशनको बढ्दो अवसर । कविलाई नजिक वा सुदूरका राम्रा कविमाझ उत्कृष्ट कविता लेख्नुपर्ने तीव्र दबाब छ । पहिलेको जस्तो कछुवा गतिको समय अहिले छैन । क्रिया–प्रतिक्रियाको परकम्पछेउ बसेर कविता लेख्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । पाठकहरू उत्तिकै चेतसम्पन्न छन् ।
द्रुततर बदलिएको राजनैतिक परिदृश्य, नाफामुखी भूमण्डलीकरणले अठ्याउँदै लगेको गोलाद्र्ध र प्रविधिले हस्तक्षेप गरेको समाजमा ठोकुवा गरेर केही भन्न अब कठिन छ । पुरातन हाजिरजवाफ शैलीले अब सान्दर्भिकता गुमाइसक्यो । आधारहरू अगाडि नसारी भन्नु सुसाइडल हँदैछ ।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा बीस, पच्चीस कविताको चर्चा नगरी नेपाली कविताबारेमा केही भन्नु जोखिमपूर्ण छ । यस सीमाप्रति सचेत हँदै, नितान्त व्यक्तिगत कारणले मलाई मन परेका आठ लिभिङ पोइटका कविताबारे चर्चा गर्छु । यी कविताले बेग्लै ब्रम्हाण्ड रचना गरेको छ, पृथक् संरचना, विशेषता, प्रवृत्ति, बिम्ब, अर्थ र सीमा बोकेर ।
‘लुतो’ श्यामलको सिग्नेचर कविता हो । सामान्य सरुवा रोगलाई बिम्ब बनाएर वैचारिकतासँग जोड्दै मान्छेको एकपाखे दृष्टिकोणको चित्रण गरिएको यो कविता असाधारण छ । श्यामल आडम्बर र छद्मताको प्रखर विरोधी लाग्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कविता लेख्छन् । समयचेतले समृद्ध र वाचाल छन् । मलाई उनी नेपाली कविता साहित्यकै सम्प्राप्ति लाग्छन् ।
कविता सिर्जनामा निरन्तर चार दशकदेखि गतिशील उनी भाषालाई मानव जीवनको सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र मान्छन् र कवितालाई त्यस अस्त्रको पनि अस्त्र । कविताको त्यही अस्त्र उज्याएर उनी लुतो विचारलाई प्रहार गर्छन् । यहाँ तर्कलाई भ्रमले जित्छ । धर्म विज्ञानको बुई चढ्छ । कला बौद्धिक विलासको साधनमात्र बन्छ । र, लेखकको सामाजिक उत्तरदायित्व बेकाम ठानिन्छ । मान्छेका उदात्त भावना उनका कवितामा आउँदा झनै उदात्त बन्छ ।
लुतो एक विचार रहेछ
मानिसलाई विचारशून्य बनाउने
आद्यबिम्बसहितको उत्तर–आधुनिक विचार
रोग र औषधि दुवै बेच्ने
नाफाखोर बजारजस्तो लुतो
जहाँ रहँदैन मानिस मानिसझैं
बस्, कन्याइरहन्छ आफ्नो आङ
तृप्त, आनन्दविभोर र बिलकुल एक्लो
आफ्नो आङ कन्याइरहनुमा । Read the rest of this entry »
यी बादलका अनेक चित्रहरूले
कोरेका सुन्दर कोलाजमाथि सन्देह गर
पानीका सुन्दर तालमा देखिने
विविध रङको अस्तित्व
र बादलका टुक्राझैँ
तिम्रा हातमा पर्न आएको हिउँको सौन्दर्यमाथि सन्देह गर ।
अखबार र टेलिभिजनका सनसनीपूर्ण समाचार
कविका फूलबुट्टे सुकिला कविता
मनको एक कुनालाई धक्का दिने बुद्धिजीवीको विचार
र, देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि सन्देह गर ।
तिम्रा सम्मानित गुरुले
मीठो भाषामा सुनाएका कथा
र, संसारका सर्वमान्य मूल्यहरूमाथि पनि सन्देह गर ।
पग्लँदै गएको हिउँजस्तो
र, अछुतो आकाशजस्तो
अर्जुनको वीरतामाथि सन्देह गर
अनि वेद र पुराणका तिलस्मी कथाहरूमाथि सन्देह गर ।
सुकरात, माक्र्स र गान्धी
डार्विन, फ्रायड र आइन्सटाइन हुन केबल तिम्रा सहयात्री
पवित्र बाइबल, रामायण, महाभारत
र, कुरान नै होइनन् अन्तिम सत्य
न ब्रह्मा सत्य हो, न मिथ्या हो जगत
विष्णु, महेश्वर, श्रीराम
क्राइस्ट, कविर, मोहम्मद
र सन्देहको कुरा गर्ने बुद्धमाथि पनि सन्देह गर ।
आँगनजस्तो एकत्र संसारमा
छैन कोही सन्देहको घेराबाहिर
सन्देहको ईश्वर रच्ने
मेरो यही कवितामाथि पनि सन्देह गर ।
म अविरल गर्छु सन्देह आफ्नै ब्रह्ममाथि पनि
जसरी माटोले हरेकपटक गर्छ
आफ्नै गर्भमा रोपिएको सत्वीजको परीक्षा ।
Interim Council of Ministers
Interim statute highlights
On politics and… (28)
14 Nepali weeklies